Laguar riad. Torre Mozarabe (2-4 pers)
Ifumaneka kwidolophu yaseBenimaurell (iVall de Laguar), le ndlu, ineminyaka engaphezu kwe-100 ubudala kwaye isanda kubuyiselwa, igcina uyilo lweMeditera kwaye iyidibanise ngokulingana kunye noyilo kunye nentuthuzelo.
Inomthamo opheleleyo wabantu abayi-2-4.
Inamagumbi amabini azimeleyo ahlulwe yipatio yangaphakathi:
1. Indlu engundoqo kunye 2. neNqaba yaseMozarabe.
1. Indlu ePhambili (uMgangatho ophantsi): KuMgangatho ophantsi sifumana umnyango, igumbi lokuhlala, indawo yomlilo, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye nokufikelela kwipatio yangaphakathi.
2. INqaba yaseMozarabe. Esifikelela kuyo ukusuka kwipatio yangaphakathi, inemigangatho emi-3: Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinesitovu sokhuni kunye nebhedi ye-trundle enebhedi ezi-2 ezongezelelweyo. Umgangatho wokuqala unegumbi eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela elipheleleyo leensuite (eneshawa), i-air conditioning kunye nokufudumeza. Kumgangatho wesibini kukho i-terrace enemibono ekhangayo yentlambo yonke kunye nolwandle, ukusuka apho unokubona khona isiqithi sase-Ibiza ngeentsuku ezicacileyo.
ILa Vall de Laguar (iBenimaurell, iFleix kunye neCampell) iphakama ifikelele kwiimitha ezingama-500 phambi kolwandle kwaye ijikelezwe yindalo phakathi kweentaba ezimbini. Kwelinye icala iBarranco del Infierno, isimanga sendalo, esakhiwe ngumlambo waseGirona onqumla intlambo yonke de ufikelele kwidama lase-Isbert. Kwelinye icala, njengehashe elikhulu elileleyo, iSierra del Cavall Verd okanye iSierra del Penyó enentabalala yemithombo nemithombo.
Indlu ikwidolophu yaseBenimaurell, malunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwindawo yecawa kunye nazo zonke iinkonzo ezikufutshane: iivenkile, iibhari-zokutyela. Kwiinyanga zasehlotyeni iqula lokuqubha likamasipala laseFleix liyavula, elikumgama weekhilomitha ezi-2 kuphela.
Ilungele ukonwabela iintyatyambo kunye nezilwanyana zasekhaya, i-gastronomy yayo, imbali yayo, iilwandle zayo ezintle ezikumgama oziikhilomitha ezimbalwa kwaye, ngaphezu kwako konke, ukukhwela intaba. Enye yezona ndlela zibalulekileyo zidlula edolophini. Into ebizwa ngokuba yi "Cathedral of Hiking or Route of the 6000 steps".
Ndiza kufumaneka ngesiqhelo. Isikhokelo sinikezelwa ekungeneni kweendwendwe kunye nalo lonke ulwazi malunga nendlu, iindlela zokuhamba ezisuka edolophini, indawo ekufutshane, iilwandle, iindawo zokutyela kunye nezinye iinkonzo. Ungaqhagamshela ngeselfowuni ukuphendula nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndiza kufumaneka ngesiqhelo. Isikhokelo sinikezelwa ekungeneni kweendwendwe kunye nalo lonke ulwazi malunga nendlu, iindlela zokuhamba ezisuka edolophini, indawo ekufutshane, iilwa…
Inombolo yomthetho: ARA-427
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Benimaurell